ဓာတ်လိုက် – Eleven Media Group
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး မယ်ဇလီပင်ပေါ်တက်၍ မယ်ဇလီဖူးခူးရာမှ ဓာတ်လိုက်သေဆုံး
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး မယ်ဇလီပင်ပေါ်တက်၍ မယ်ဇလီဖူးခူးရာမှ ဓာတ်လိုက်သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဇူလိုင် ၁၇ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ဓာတ်လိုက်သေဆုံးသည့် အမျိုးသားမှာ လှိုင်သာယာမြို့နယ် (၇) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သည့် ကို…. (၃၄ နှစ်) ဆိုသူဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ဇူလိုင် ၁၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲခန့်က လှိုင်သာယာမြို့နယ် (၇) ရပ်ကွက် ရန်ကုန်-ပုသိမ် ချဉ်းကပ်လမ်းဘေးရှိ မယ်ဇလီပင်ပေါ်သို့တက်၍ မယ်ဇလီဖူးခူးရာမှ ၎င်းလက်ဖြင့် ကိုင်ထားသည့် သစ်ကိုင်းနှင့် လျှပ်စစ်ကြိုးတို့ထိမိပြီး ဓာတ်လိုက်ကာ သစ်ပင်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ ဓာတ်လိုက်ကာ ပြုတ်ကျခဲ့သဖြင့် ကို…. မှာ လက်အရေပြား စုတ်ပြဲဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကာ လှိုင်သာယာ ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ကုသစဉ် သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ကို လှိုင်သာယာမြို့မ ရဲစခန်းမှ သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် (၅၆/၂၀၁၈) ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး စစ်ဆေးဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged ဓာတ်လိုက်, ရန်ကုန်LeaveaComment on လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး မယ်ဇလီပင်ပေါ်တက်၍ မယ်ဇလီဖူးခူးရာမှ ဓာတ်လိုက်သေဆုံး
Posted in NewsTagged ဓာတ်လိုက်, ရန်ကုန်LeaveaComment on တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၌ ဓာတ်လိုက်သေဆုံးခဲ့သည့် အဋ္ဌမတန်းကျောင်းသား မောင်မျိုးမင်းထွန်း၏ ဈာပနအား ရေဝေးသုသာန်တွင် ပြုလုပ်
Posted on June 29, 2018 June 30, 2018 by ဇော်ဝင်းချစ်
လူနှစ်ဦးဓာတ်လိုက်သေဆုံးမှုဖြစ်စဉ် နှင့်ပတ်သက်ပြီး တောင်ငူအမှတ်(၂)နယ် မြေရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ်အောင်ကိုကိုက “သံဖရိန်က လျှပ်စစ်စီးပြီးတော့မှ သူတို့လေးယောက်လုံးကိုလိုက်တာ၊ အဲဒီတော့ နှစ်ယောက်သေပြီး နှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရတယ်၊ ဒဏ်ရာရတဲ့လူ တွေအခြေအနေကတော့ အခြေအနေကောင်းတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇွန် ၂၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲခန့်က တောင်ငူမြို့၁၁ ရပ်ကွက် ကန်တော်လမ်းရှိ ဆန်စက်တစ်ခုတွင် ဆန်စက်မှ အလုပ်သမားများဖြစ်ကြသည့် ကိုကျော်သူ ၃၀ နှစ် (ဘ)ဦးတင်ရွှေ၊ ကံပေါက်ကြီးရွာ၊ ကိုငြိမ်းထိုက် ၃၀ နှစ်(ဘ)ဦးအောင်ငွေ၊ ဟင်းရည်များကျေးရွာ၊ ကိုဂျစ်တူး ၂၈ နှစ်(ဘ)ဦးကျော်စိုးကံ ပေါက်ကြီးကျေးရွာနှင့်ကိုသက်နိုင်၂၅ နှစ်(ဘ)ဦးမြင့် သိန်းဟင်းရည်များကျေးရွာ တောင်ငူမြို့နယ် နေသူတို့လေးဦးမှာ ဆန်စက်တွင်ရှိသောအမြင့် ခုနစ်ပေရှိသည့် သံဖရိန်ဖြင့် လုပ်ထားသော အိမ်သာအား ကျင်းဟောင်းနေရာမှကျင်း သစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းသယ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ ရွှေ့ပြောင်းသယ်ဆောင်ရာတွင် သံဖရိန်အိမ်သာအား ဆန်စက်အတွင်းရှိ စပါးခွံပုံပေါ်အားဖြတ်၍ မရွှေ့ရာမှ စပါးခွံပုံအထက် အမြင့်ခုနစ်ပေခန့်တွင် သွယ်တန်းထားသော 11kv ဓာတ်အားကြိုးနှင့် အိမ်သာသံဖရိန်တို့ထိမိပြီး အလုပ်သမားလေး ဦးစလုံးအား ဓာတ်လိုက်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဓာတ်လိုက်ခံရသူလေးဦးအနက်ကို ကျော်သူနှင့်ကိုငြိမ်းထိုက်တို့တွင် ဒဏ်ရာများရရှိကာ အခင်းဖြစ်နေရာ၌ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး ကိုဂျစ်တူးနှင့် ကိုသက်နိုင်တို့တွင် ဒဏ်ရာ (မစိုးရိမ်ရ) တို့ရရှိသွားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှတ် (၂) နယ်မြေရဲစခန်းက သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၈)ဖြင့် အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged ဓာတ်လိုက်LeaveaComment on အိမ်သာကျင်းရွှေ့ရာမှ အမျိုးသားလေးဦး ဓာတ်လိုက်ခံရပြီး နှစ်ဦးသေကာ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိမှု တောင်ငူတွင် ဖြစ်ပွား
Posted on June 3, 2018 June 3, 2018 by Eleven Media Group
ဓာတ်ပုံ – ဖိုးဇော်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်မြို့ ရှမ္မလည်ဆွဲရပ်ကွက် မျှော်အင်းလမ်းပေါ်ရှိ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းဝင်း အတွင်းတွင် ဇွန် ၁ ရက် မနက်ပိုင်းက အုန်းလက်တက်ခုတ်သူတစ်ဦး ဓာတ်လိုက်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဇွန် ၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီခန့်တွင် ၎င်းခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်း လမ်းနံဘေးရှိ အုန်းပင်ပေါ်သို့တက်၍ ဦးချစ်မောင်က အုန်းလက်တက်ခုတ်ရာ အနီးရှိ 33KV (ထားဝယ်-သရက်ချောင်း) ဓါတ်အားလိုင်းပေါ်သို့ အုန်းလက်ပြုတ်ကျသဖြင့် ယင်းအုန်းလက်အား ဆွဲယူရာမှ ဓာတ်လိုက်ကာ သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ ထားဝယ်ခရိုင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့က ကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်များနှင့် ဇမ္ဗူသီရိ အရေးပေါ် လူနာတင်ယာဉ်အဖွဲ့များက သွားရောက်ကူညီခဲ့ပြီး အုန်းပင်ပေါ်ရှိ ကြိုးတန်းလန်းဖြင့် ဓာတ်လိုက်ကာ သေဆုံးနေသူကို ကရိန်းယာဉ်ဖြင့် သယ်ယူခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
“မနက်က ခရစ်ယာန်ကျောင်းနားမှာ လူစည်နေတော့ ပထမယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်တယ်ပဲထင်တာ။ နောက်မှ အုန်းပင်ပေါ်မှာ ဓာတ်လိုက်ပြီး ကြိုးတန်းလန်းနဲ့ သေနေတာကို တွေ့တာ။ သူကအုန်းပင်ပေါ် အုန်းလက်တက်ခုတ်တော့ အုန်းလက်က ဓာတ်ကြိုးပေါ် ကျတယ်ထင်တယ်။ အဲဒါကိုဖယ်ဖို့ လက်နဲ့ ဆွဲလိုက်တုန်း အခုလို ဓာတ်လိုက်သွားတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ဓာတ်ကြိုးတွေကလည်းကာ ဗာကြိုးတွေ မဟုတ်တော့ အခုလိုဖြစ်သွားတာ” ဟု အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာအနီးတွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဓာတ်လိုက်မှုကြောင့် ထားဝယ်မြို့ ၀ဲကျွန်းညောင်ရမ်းရပ်ကွက်နေ ဦးချစ်မောင် (၅၀ နှစ်) မှာ အခင်းဖြစ်ရာတွင် သေဆုံးခဲ့ပြီး ၎င်း၏ရုပ်အလောင်းအား ထားဝယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံထံ တင်ပို့ကာ စစ်ဆေးနေကြောင်း၊ ၎င်းမှာ အုန်းလက်များ တက်ခုတ်ရာ လျှပ်စစ်မီးကြိုးပေါ်သို့ အုန်းလက်ပြုတ်ကျ၍ အုန်းလက်အား လက်ဖြင့်ဆွဲယူရာမှတစ်ဆင့် ဓာတ်လိုက်သေဆုံးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပြီး ယင်းသေဆုံးမှုအား ထားဝယ်မြို့မရဲစခန်းမှ သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် (၁၈/၂၀၁၈) ဖြင့် ဖွင့်လှစ်၍ စစ်ဆေးနေသည်ဟု ထားဝယ်မြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။
ထားဝယ်ဒေသအတွင်း သွယ်တန်းထားသော ဓာတ်အားလိုင်း အများစုမှာ ကာဗာကြိုးများ မဟုတ်သည့်အပြင် နေအိမ်များ၊ သစ်ပင်များနှင့် နီးကပ်စွာ သွယ်တန်းထားသောကြောင့် မိုးရာသီ၌ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်မှုအပေါ် ဒေသခံများ အနေဖြင့် စိုးရိမ်မှုများ ရှိနေကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်တာဝန်ရှိသူများမှ ဓာတ်အားလိုင်းများ အနီးရှိ သစ်ပင်များကို ရှင်းလင်းနေသော်လည်း ယခုလပိုင်းအတွင်း မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များအတွင်း သွယ်တန်းထားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများပေါ်၌ မကြာခဏရှော့ဖြစ်၍ မီးလောင်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ဒေသခံများအကြား စိုးရိမ်မှုများ မြင့်တက်နေသည်ဟု သိရသည်။
Posted in NewsTagged တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး, ထားဝယ်, ဓာတ်လိုက်LeaveaComment on ထားဝယ်မြို့တွင် အုန်းလက်တက်ခုတ်သူတစ်ဦး ဓာတ်လိုက်သေဆုံး
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ စက်ရုံတစ်ရုံတွင် အလုပ်သမား ငါးဦး ဓာတ်လိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး တစ်ဦးသေဆုံးကာ လေးဦး ဒဏ်ရာရရှိ
Posted on May 2, 2018 May 3, 2018 by Eleven Media Group
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ စက်ရုံတစ်ရုံတွင် အလုပ်သမားငါးဦး ဓာတ်လိုက်သဖြင့် တစ်ဦးသေဆုံးပြီး လေးဦး ဒဏ်ရာရရှိမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရသည်။
မေ ၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခန့်တွင် ရွှေပြည်သာမြို့နယ် (၄) ရပ်ကွက်ရှိ အထည် ချုပ်စက်ရုံဝင်းအတွင်းတွင် အလုပ်သမား ၁၅ ဦးသည် စက္ကူများတင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် သံစင်များအား နေရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ နေရာရွှေ့နေစဉ် ၎င်းတို့မှာ သံစင်များအား မနိုင်သဖြင့် အောက်သို့ချစဉ် အင်္ဂတေကြမ်းခင်းတွင် ရှိနေသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စီးဆင်းနေသည့် မီးကြိုးပေါ်သို့ ချမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက် သံစင်၏ အလေးချိန် ကြောင့် မီးကြိုးမှာ ပေါက်ပြဲပြီး လျှပ်စစ်စီးဆင်းကာ ဓာတ်လိုက်ခဲ့သဖြင့် ကို…. (၁၈)နှစ်မှာ သေဆုံးခဲ့ပြီး အခြားအလုပ်သမားလေးဦးမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်အား လှော်ကားနယ်မြေ ရဲစခန်းက သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် (၁၄/ ၂၀၁၈) ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged ဓာတ်လိုက်LeaveaComment on ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ စက်ရုံတစ်ရုံတွင် အလုပ်သမား ငါးဦး ဓာတ်လိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး တစ်ဦးသေဆုံးကာ လေးဦး ဒဏ်ရာရရှိ